मुठभेडका नाममा | Everest Times UK
सर्लाहीमा केही दिनअघि प्रहरीले भिडन्तको नाममा विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेललाई गोली हान्यो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । उनको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमै भयो वा भिडन्तको नाममा मारिए भन्ने अहिले चर्को बहस बनेको छ ।
विप्लवको नेकपा अहिले प्रतिवन्धित छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेकपा सत्तामा छ । हिजोको द्वन्दको स्थिति जस्तै अहिले पनि बारम्बार मानिस भिडन्तको नाममा मारिएकै छन् । संसदसम्म चर्को आवाज उठेको छ । सोमबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा त यो विषयलाई लिएर चर्काचर्की नै भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दोहोरो भिडन्तमा नै पौडेलको मृत्यु भएको बताएको छ । तर, सत्तारुढ दलकै सांसद एवं भूपू गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने भिडन्तको नाममा हत्या भएको बताएका छन् । उनले प्रशस्त शंका गरेका छन् । त्यसैले पनि उनको हत्या भएको अनुमान लगाउनेहरु अहिले व्यापक बनेको छ ।
सत्तारुढ दलका विद्यार्थी नेताहरुले त घटना भएकै दिन सो घटना भिडन्तको नाममा हत्या भएको बताइसकेका थिए । यसरी युद्धको घोषणा नभएको अवस्थामा पनि भिडन्तको नाममा राज्य पक्षबाट नै मानिस मारिने स्थिति आइरहँदा कतै मुलुक फेरि दुर्घटनामा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।
अहिले पनि सत्तामा कम्युनिष्ट नै छन् । प्रतिवन्धित दल पनि कम्युनिष्ट नै हो । हिजोको जनयुद्ध त संवादबाट समाधान भयो भने विप्लवसँग पनि वार्ताका लागि सरकारले आव्हान गर्नुपर्छ । तत्काल संवाद गरेर नेपाली दाजुभाइ जोकोहीको पनि मृत्यु हुनुबाट जोगाउनुपर्छ । होइन भने कसको रिसइबी कोसित हुन्छ, दोहोरो भिडन्तको नाममा ज्यान जान्छ । त्यसैले यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ ।
गृह प्रशासन हाँक्ने हिजोको युद्धबाट आएका व्यक्ति । आजको प्रतिवन्धित पार्टीका नेता पनि रामबहादुरकै हिजोका साथी । अब केमा मन नमिलेको हो ? वैचारिक मतभिन्नता हो भने देश र जनताको पक्षमा एक ठाउँमा सहमतिमा आएर निकास दिनुपर्छ । होइन भने मुलुकलाई फेरि भिडन्तमा धकेलेर जनतालाई दुःख दिने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसतर्फ सबै सचेत बन्नु जरुरी छ ।
संविधानले सबै किसिमका स्वतन्त्रता दिएको छ । राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता छँदैछ । खुला राजनीतिबाट आफूलाई स्थापित गराउने अवसर पनि विप्लवलाई छ । यो मौका गुमाउन दिनु हुँदैन । यसका लागि पनि पक्कै उनी नभएको स्थिति पक्कै पनि होइन । त्यसैले सचेतनापूर्वक मुलुकलाई निकास दिन विप्लवको पनि उत्तिकै भूमिका छ । मुठभेडका नाममा अरु नमरुन भन्नका लागि पनि विप्लवले विकल्प दिनैपर्छ ।